Zimbabwe Youmba Homwe yeMari yeBudiriro Ichishandisa Zviwanikwa
Gunyana 27, 2013
WASHINGTON — Zimbabwe iyo iri kunetsekana zvikuru nenyaya yekugadzirisa hupfumi hwayo inoti yave kuzoumba homwe yemari ichashandiswa mumabasa ebudiriro ichishandisa zviwanikwa zvayo kana kuti Sovereign Wealth Fund.
Asi patotanga kukandirwanwa makobvu nematete pakati peZanu-PF nebato rinopikisa reMDC-T kuti iyi ipfungwa yaani.
VeZanu-PF vanoti vave kuparura chirongwa ichi nekuti zvirongwa zvose zvakauya munguva yehurumende yemubatanidzwa hazvina kushanda. Asi veMDC-T vanoti iyi ipfungwa yavo yakarambwa neZanu-PF munguva yehurumende yemubatanidzwa.
Munyori mubazi rezvehupfumi VaWillard Manungo vachitaura neZBC kumucheto wemusangano weZimbabwe Programme for Socio-Economic Transformation kana kuti ZIMPEST vanoti chirongwa ichi chichabatsira muhurongwa hwebudiriro.
Munyori wedare remakurukota VaMisheck Sibanda vakatsinhirawo kuti homwe iyi iri kuumbwa.
Asi vaive gurukota rezvegwara rehupfumi muhurumende yemubatanidzwa VaTapiwa Mashakada veMDC-T vanoti ivo ndivo vakaunza pfungwa yechirongwa chehomwe iyi kudare reparamende asi makurukota eZanu-PF akaramba kuchitambira.
Gurukota rinoona nezvehupfumi VaPatrick Chinamasa vari mushishi kuyedza kutsvaga mari nekukwezva vekunze kuti vauye kuzotanga mabhizimisi munyika.
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vanoti zviwanikwa zvakaita semangoda negoridhe ndizvo zvichashandiswa mukumutsiridza hupfumi hwenyika.
Nyaya yekugadzirisa hupfumi inonzi nevakawanda ndiro dambudziko guru rakatarisana nehurumende itsva sezvo vanhu vakawanda vasina mabasa.